Taliye C/Xamiid oo sheegay in Al-Shabaab Todobaad Gudihiis uga saarayaan Sh/Hoose | SMC
Home WARARKA MAANTA Taliye C/Xamiid oo sheegay in Al-Shabaab Todobaad Gudihiis uga saarayaan Sh/Hoose
Taliye C/Xamiid oo sheegay in Al-Shabaab Todobaad Gudihiis uga saarayaan Sh/Hoose
Taliyaha Ciidamada Dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Cabdi Xamiid Maxamed Diriri ayaa faah faahin ka bixiyay howlgallada maalmihii la soo dhaafay ay Ciidamada ka wadeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha waxaa uu sheegay in Ciidamada ay guulo ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolkaas,isla markaana ay khasaaro ku gaarsiiyeen Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigay.
Sarkiisha kale iyo Ciidamada dowladda ee howlgalka wada ayuu taliyaha ugu baaqay inay kordhiyaan,isaga oo sheegay in muddo todobaad ah ay Shabaab uga saari doonaan deegaannada ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidanka dowladda ayaa bilihii u dambeysay waxaa ay fuliyeen howlgallo kala duwan,waxaana taliska Ciidanka xoogga dalka ay Maalin ka hor sheegeen inay la wareegeen deegaanada,Gandarshe Jilib Marka iyo deegaano kale.
Previous articleLiiska Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug iyo Qabiilada soo galay & Qabiilka ugu wasiirada badan)
Next articleQaraxyo lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada AMISOM